Ị nwere ike iji naanị ngwaọrụ 2 maka akaụntụ Evernote bụ isi | Androidsis
Evernote na -enye ndị ọrụ na -eji akaụntụ efu ha enweta ahụmịhe dị oke mma na ịnweta ndetu niile ha mekọrịtara na ngwaọrụ ha ọ bụla. N'iji nha kachasị na ndetu nke enwere ike bulite kwa ọnwa, ị nwere ezu atụmatụ ka ị ghara ịdaba na akaụntụ adịchaghị ma ọ bụrụ na mmadụ ejighị ngwa ahụ rụọ ọrụ nke ọma.
Ugbu a bụ mgbe Evernote chọrọ ime ihe iji bulie ọnụahịa nke akaụntụ adịchaghị na machibidoro ịnweta ngwaọrụ abụọ maka akaụntụ efu. Mmụba ọnụahịa bụ maka atụmatụ Plus na adịchaghị. Mmegharị na -esite na mkpa ịkpata ego na ịga n'ihu na -enye ọrụ ka ukwuu maka Evernote nke na -enye nnukwu uru na -enweghị iwepu mgbasa ozi n'ime ngwa ahụ.
Mmụba ọnụahịa na Evernote Plus sitere na $ 24,99 kwa afọ ma ọ bụ $ 2,99 kwa ọnwa, mana n'oge na -adịghị anya, anyị ga -eme tinye otu dollar ọzọ na ego kwa ọnwa ma ọ bụ na -atụ anya ịkwụ $ 34,99 kwa afọ. Mmụba a na -apụtakwa na nhọrọ adịchaghị, nke na -aga site na $ 49,99 kwa afọ ma ọ bụ 5,99 kwa ọnwa, wee gaa ugbu a na $ 7,99 ma ọ bụ $ 69,99 kwa afọ. Mmụba dị egwu na nhọrọ adịchaghị mma nke ọtụtụ ndị ọrụ ga -eche maka ya ịdaba na ọrụ ndị ọzọ.
Akaụntụ mbụ ma ọ bụ nnwere onwe na mbụ akwụghị ụgwọ ọ bụla, mana nwere mmachi na bandwidth na atụmatụ. Ugbu a a gbakwunyere mmachi ọhụrụ nke pụtara na ị nwere ike iji akaụntụ Evernote gị naanị na ngwaọrụ abụọ. Nke pụtara na ọ bụrụ na ị nwere Evernote na kọmputa gị, naanị ị nwere ike iji otu ekwentị mkpanaaka ka emekọrịta akaụntụ gị niile. Nke a pụtara na, ọ bụrụ na ị na -ejikarị mbadamba ihe dị ka mgbakwunye na Evernote, ị ga -achọ nhọrọ ndị ọzọ ma ọ bụ malite iche echiche ịkwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na enwere ihe pụrụ iche gbasara Evernote, ọ bụ na enweghị mgbasa ozi na -eme mwakpo yana na, n'adịghị ka OneNote Microsoft ma ọ bụ Google's Keep, data gị nọrọ onwe gị na -ejighị ya maka ebumnuche ndị ọzọ, yabụ dabere n'otú i si eji ngwa ahụ, ọ nwere ike ịmasị ịkwụ ụgwọ kwa afọ maka Plus. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na -eji ya n'ụzọ bụ isi, ị nwere ike lelee nhọrọ ndị ọzọ dị ka ndị a kpọtụrụ aha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Evernote na-ewelite ego ma na-egbochi akaụntụ efu
Na ihe niile maka Brexit
Ọ ga -ekwe omume!
Ejiri Snapdragon 820 kachasị maka ikpo okwu Tango nke Google